နီကိုရဲရေ.. | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
လက်ချောင်းတွေက ထိပ်မှာ လုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်း
ဒီနေ့ JD ရဲ့ Status မှာ RIP နီကိုရဲ လို့တွေ့ကတည်းက သိလိုက်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း လှမ်းမမေးလိုက်ဘူး။
ချိုသင်းရေ... စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ လွဲပြန်ပြီနော်။
ကျွန်မလည်း နီကိုရဲစာအုပ် များများ မဖတ်ဖူးပေမယ့် ဖတ်ဖူးသလောက် စာအုပ်တွေကသိပ်ကို ရီရလို့ ဘယ်တော့မှ မေ့မသွားပဲ အမြဲတမ်း သတိရပြီး ပြန်ပြောပြီး ရီဖြစ်တယ်။ အခုလို ကြားရတာ တကယ်ပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
လူတွေကို သူရယ်အောင် လုပ်ခဲ့သမျှ
သူ့အပေါ်ကို အလွမ်းတွေ ပိုစေလေသလား မပြောတတ်တော့ပါဘူး မချိုသင်းရယ်...
သူ့ စာအုပ်တော့ မဖတ်ဖူးပေမဲ့
သူ့ ဝထ္တု ဇတ်လမ်းတွေ ကြည့်ဖူးတယ်
ရီ ရလို့ ကြိုက်တယ် နှမြောစရာနော်
သူ့ဇတ်ကောင်တွေ က သိတ်အသက်ဝင်တယ်။
ဂျီတော့ စတေးတပ်စ် တွေမှာ တွေ့တွေ့နေလို့ မဟုတ်ပါစေနဲ့ ဆုတောင်းနေတာ၊
မကြည်ပြာလုံးချင်းထွက်တော့စာအုပ်ဆိုင်က ငှားလာတာ၊ အကျိုးမရှိတာတွေပဲ ဖတ်နေတယ်လို့ အဖေဆူတာတောင် ခံရသေး၊ ကလောင်အသစ်မို့လည်း ပါတယ်။ နေ့လည်ဖက် တခစ်ခစ်ရယ်သံကြားလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ဖေဖေရယ် နီကိုရဲရဲ့ မကြည်ပြာစာအုပ်ဖတ်ပြီး ရယ်နေတာ။ အမှတ်တရပဲ ။
အဲဒီစာအုပ် အပိုင်း ၂ ပိုင်းလုံး ခဏခဏ ငှားဖတ်ဖြစ်ပြီး ဖတ်တိုင်းလည်း ရိုးမသွားပဲ ရယ်နေရတုံးပါ။
လူချင်းမသိပေမယ့် စာဖတ်ပရိသတ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ အရင်တစ်ပတ်ကမှ ရန်ကုန်က ပို့ပေးတဲ့ သူ့စာအုပ် ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။
နီကိုရဲ ၀တ္ထုတွေကို ကြိုက်တယ်.. အမရဲ့ ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကို ဖတ်ပြီး တခြားအကြောင်းရေးထားတာ ဖြစ်မယ်လို့တွေးမိသေးတယ်.. အခုတော့ ဆုံးသွားပြီတဲ့.. စိတ်မကောင်းဘူး..
ကာတွန်းကံချွန်၊ ဇော်ဝမ်း၊ တက္ကသိုလ်ထွန်းနောင်၊ နီကိုရဲ
အခုတလော စိတ်မကောင်းစရာတွေပဲ ကြားနေရလို့
လူက တော်တော်ထုံပေပေဖြစ်နေပေမယ့် နီကိုရဲ ဆုံးတယ်ကြားတော့ အရမ်းဝမ်းနည်းသွားတယ်...
သူ့ထုံးစံအတိုင်း အလွဲလေးများလားလို့ မျှော်လင့်နေရင်း...
ချိုသင်းရေးတာ ဖတ်ရတော့ ဒါ အတည်ပေါ့နော်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ပြောနေမိတယ်...
ကောင်းရာဘုံဘဝမှာ ငြိမ်းချမ်းဖို့ အတူတူ ဆုတောင်းကြတာပေါ့နော်....
စာရေးသားပုံကလည်းစာတကြောင်းချင်းစီက ကဗျာတပုဒ်လို ကောင်းလွန်းလို့ ။ နှမြောလိုက်တာဗျာ။
ဆုံခဲ့ဖူးပေမယ့် မရင်းနှီးခဲ့ပါ ..
ခံစားကြည့်ပါ မသီတာကိုတော့ စွဲခဲ့ဖူးပါတယ် ..
ကိုနီကိုရဲ ငြိမ်းချမ်းပါစေ ..
စိတ်မကောင်းလိုက်တာချိုသင်းရယ်..ချိုသင်းပို့စ်ကို မြင်မှ....သူ့စာတိုင်းကို မဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာတွေကို သဘောကျခဲ့တာ....ကောင်းရာဘုံဘ၀မှာပျော်မွေ့နိုင်ပါစေလေ..ကျန်ရစ်သူမိသားစုအတွက်လည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး...
သူ့ရဲ့ ကြည်ပြာရောင် နဂ္ဂတစ်တွေကတော့ ဘယ်တော့မှ ဆေးသားမလျော့နိုင်ပါဘူး။ လေးစားထိုက်တဲ့ စာရေးဆရာဖြစ်လို့ နှမြောတယ်။
နီကိုရဲဆိုတာ ကျနော် အနှစ်သက်ဆုံးစာရေးဆရာပါပဲ...။
ခုထိတော့ ဘာသတင်းမှ မရသေးဘူး....။
တကယ်မဟုတ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ အမရယ်...။
ဆရာနီကိုရဲ ကောင်းရာသုဂတိ လားပါးစေ...။
စိတ်မကောင်းဘူး အမ ချိုသင်းရယ်..
နီကိုရဲ ကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်ပါစေ..
ကြားတာ နှလုံးရောဂါလို့ ကြားပါတယ်.ကျနော်တို့ချစ်ခင်
တဲ့သူတွေက အသေစောပြီး မချစ်ခင်မနှစ်သက်သူတွေ
မြန်မာပြည်အတွက် လူတော်လူမွန်တွေ အကြွေစောမှာ နှမျောမိပါတယ် .. အနာဂတ်မြန်မာပြည်ကို ဖေးမမဲ့သူ တယောက် အလျှော့မခံချင်ပါဘူးဗျာ ....
နောက်ဆို သူ့ လက်ရာ လေးတွေ မဖတ်ရတော့ဘူးပေါ့နော်...။ သူ့ ရေးတဲ့ စတိုင်လေးတွေကို အရမ်းနှစ်သက်မိတယ်.....၊ အသက်ဝင်လွန်းတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ အမြဲ ပြုံးနေရတဲ့ လက်ရာလေးတွေ ... တော်တော်လေးကို နှမြောမိပါတယ်..။ စိတ်မကောင်းဘူး....။
စိတ်မကောင်းလိုက်တာချိုသင်းရယ်… ဘယ်လိုမှ မျှော်လင့်မထားတဲ့သတင်း… ပြီးတော့ သူငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာ…
စာရေးဆရာ နီကိုရဲ ကွယ်လွန်ခြင်း အမရဲ့ ၀မ်းနည်းမှု
မှတ်တမ်းကို ဖတ်ရူသွားပါတယ် အမ။
thinking my time is also nearer ..
but well, ... still wanting to taste drops of honey.
thanks for the post Ah Ma.
တနေ့ကတောင် အွန်လိုင်းမှာ သူ့ဝတ္တုတွေ အသစ်ထွက်လား ရှာကြည့်မိသေးတယ်။ ပေါက်စီတစ်လုံး နွားနို့တခွက်နဲ့ ကြည်ပြာရောင်နဂတစ်များ မနက်ခင်းတွေကို သတိရတယ်။ အမပြောသလို သေမင်းနဲ့ လွဲပါစေလို့ မချင့်မရဲဆုတောင်းမိပါတယ်။
ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့ သတင်းကို ၂ခါတောင် ပြန်ဖတ်မိတယ် .....
နှမျောလိုက်တာ အမရယ် ...
စိတ်မကောငး ဖြစ်ရပါတယ် အမရယ်
အများကြီး မဖတ်မိပေမယ့် ဖတ်မိသမျှ နှစ်သက်ရတဲ့ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ပါပဲ။ ဆုံးရှုံးရခြင်းအတွက် ၀မ်းနည်းမိပါတယ်...
နီကိုရဲ ကောင်းရာဘုံဘ၀မှာ ငြိမ်းချမ်း ပါစေ။
နီကိုရဲ တဲ့ သူ့နာမည်က.... နာမည်က ဘာမှန်းမသိဘူး...သူ့ကိုသူလည်း နာမည်ပေးတုန်းကတော်တော်စဉ်းစားပြီးမှ ပေးခဲ့ရတယ်တဲ့.... "ကကြီး" ကနေပြီးတော့ "အ" အထိကို အစဉ်လိုက်ချရေးပြီးမှ သူ့နာမည်နဲ့လိုက်တဲ့ "နီ" ဆိုတာလေးကို ရွေးပြီး ပေးခဲ့တဲ့နာမည်လို့ပြောတယ်ဗျာ... သူ့ကို စပြီးသိခဲ့တာက "တစ်သုံးခုနှစ်ရှစ်" တဲ့... သူ့ခုံနံပါတ်ပါတဲ့ဗျာ.... ဘယ်စာစောင်ထဲမှာ ဖတ်မိသွားတာလဲ မသိပေမယ့် ရင်ထဲက ဘယ်တော့မထွက်တော့တဲ့ စာရေးဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်သွားတယ်... အရေးအသားက ဟာသဆိုပေမယ့် ကလိထိုးပြီး ရယ်ရတာမဟုတ်ဘူး သိပ်ကောင်းတယ်ပေါ့.... ဆရာနီကိုရဲ မရှိတော့ပေမယ့် ဆရာရဲ့နာမည် နှင့် ဟာသတွေက အမြဲထာဝရရှင်သန်နေမှာပါဗျာ... ကောင်းရာသုဂတိရောက်ပါစေဗျာ....